गृहपृष्ठ » धर्म/संस्कृती » यदि तपाई जानी अन्जानी झुट बोल्नुहुन्छ भने होसियार, यमराज हेरिरहेका छन् : यो पढ्नुहोस्
एजेन्सी । कहिलेकाहीँ मानिसहरूले जानेर वा नजानी झुटो बोल्छन्। तर के तपाईलाई थाहा छ झुट जानाजानी बोलियोस् वा नजानेर, त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ । हाम्रो धार्मिक ग्रन्थमा पनि यसको उल्लेख छ ।
एउटा यस्तो कथा छ, जसमा यमराज जीले स्वयं बताउनुभएको छ कि झुट होस् वा निन्दा, जानाजानी होस् वा अनजानमा, सधैं फल भोग्नै पर्छ । त्यसोभए पुरा कथालाई विस्तृत रूपमा जानौं‘
यमराजसँग सम्बन्धित किंवदन्ती यस्तो छ
पौराणिक कथा अनुसार, एक पटक एक राजाले ब्राह्मण भोज आयोजना गरे। यस पर्वमा उनले देश विदेशका सम्पूर्ण ब्राह्मण तथा विद्वानहरुलाई निमन्त्रणा दिएका थिए ।
यस पर्वका लागि ठूलो संख्यामा भान्छाहरूले खुला आकाशमुनि भोजका लागि विभिन्न प्रकारका परिकार र मिठाईहरू तयार पारेका थिए । जसको सुगन्ध दरबारभर फैलिरहेको थियो । त्यसपछि अचानक आकाशमा एउटा चील तीव्र गतिमा उडिरहेको थियो।
एउटा डरलाग्दो सर्प आफ्नो पञ्जामा च्यापेको थियो, जो चीलको पखेटाबाट बाहिर निस्कन खोज्दा बारम्बार चिच्याइरहेको थियो। यसो गर्दा धेरै पटक सर्पको मुखबाट विषका केही थोपा तल बनाइएको खानामा पर्यो ।
तर, खाना पकाउने कोहीलाई पनि सर्पको विष परेको थाहा थिएन । केही समयपछि सबै ब्राह्मणहरूलाई एउटै खाना खुवाइन्छ। विष यति बलियो थियो कि खाना खानेबित्तिकै सबै ब्राह्मणको मृत्यु भयो।
जब राजालाई ब्रह्मा मारेको आरोप लगाइयो
पौराणिक कथा अनुसार ब्रह्मा मारेको पाप थाहा पाएर राजालाई दुःखद घटनाको बारेमा थाहा भएपछि राजा दुःखी भए । अब निर्णय धर्मराज यमराजले गर्ने थियो ।
आखिर यति धेरै ब्राह्मण मारेको दोष कसलाई दिने ? वास्तविक दोषी को हो ? सबै ब्राह्मणहरूलाई भोजमा निमन्त्रणा गर्ने राजाको मुखिया थियो ? वा ब्राह्मणहरूको लागि खाना पकाउने भाँडामा सर्पको विष खसेको थाहा नभएका ती भान्छाहरूलाई ? त्यसपछि यमराजले सोचे, त्यसो भए यो अपराधको दोष राजा र भान्छालाई जाँदैन ।
त्यसपछि यमराजले यस्तो निर्णय गरे
अब बाँकी रहेका सर्प र चील, जसले सर्पलाई आफ्नो खाना बनाउन निकै मेहनत गरिरहेको थियो ।
यमराजको नजरमा उनी पनि दोषी छैनन् । अब बाँकी रहेको विषालु सर्प जो चीलको पञ्जाबाट बच्न बारम्बार रिसाउँदै आएको थियो, त्यही रिसले सर्पको मुखबाट केही थोपा विष निस्किएर खानामा पर्यो र भोजमा आएका ब्राह्मणहरूको मृत्यु भयो ।
त्यसो भए यमराजको दर्शन के थियो त्यो सर्प वास्तविक अपराधी हो ? अहँ, यमराजले पनि उसलाई दोषी ठान्दैनन् किनकी रिसाउनु सर्पको स्वभाव हो र कसैको जीवन रक्षा गर्नु पाप होइन। यमराजले केही समय निर्णय रोके ।
त्यसपछि ब्रह्माको ज्यान लिइएको दोष उनको शिरमा लगाइयो।
कथा अगाडि बढ्छ र ब्राह्मणको ज्यान लिइएको दोषी को थियो ? यो थाहा पाएपछि एक दिन केही ब्राह्मणहरूले एउटी महिलालाई भगवान राजालाई भेट्न दरबार जाने बाटो सोध्न थाले।
महिलाले दरबारको बाटो भने तर भनिन् यो राजा ठिक छैन, केही दिनअघि खानामा विष मिसाएर तिमीजस्ता निर्दोष ब्राह्मणको ज्यान लिइएको थियो । महिलाको मुखबाट यो शब्द निस्कने बित्तिकै यमराजले निर्णय गरे कि यति धेरै निर्दोष ब्राह्मण मारेको दोष यी महिलाको भाग्यमा थपिनुपर्छ।
नारीको भाग्यमा मात्र किन ? यो सम्पूर्ण कथासँग महिलाको कुनै सरोकार थिएन। त्यसोभए किन ब्रह्माको ज्यान लिइएको नारीलाई दोष लाग्यो ? यमदूतहरूले यमराजलाई यो प्रश्न गरे।
त्यसैले पापको फल सबैले पाउँछन्
कसैले जानाजानी पाप कर्म गर्दा स्वार्थी साबित भएर आनन्द प्राप्त हुने यमराजले बताए । तर निर्दोष ब्राह्मणहरूलाई मारेर स्वार्थ सिद्ध गर्नमा न राजा, भान्छा, न चील र सर्पले आनन्द उठाए।
यस्तो अवस्थामा यो नजानेको पापको सम्पूर्ण दोष त्यस महिलालाई जान्छ जसले मनमा ईर्ष्याको भावना लिएर यो पापपूर्ण कार्यको जानाजानी निन्दा गरिन् ।
यस्तो घटनाको नराम्रो काम गर्दा महिलाले आनन्द पाउनु पर्छ। तसर्थ, झूट बोल्ने र ईश्वरनिन्दा दुवैबाट सधैं बच्नुपर्छ, चाहे जानी–जानी वा नजानी।